Ukuphupha ngeLampu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Isibane ngumthombo wokukhanya onokusetyenziselwa ukuvelisa ukukhanya ngokuguqula amandla. Ngokudibeneyo, izibane, apho kukho iifom ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngezibane ezijingayo, izibane zomgangatho, iikhandlela, izibane zetafile, izibane zesilingi, izibane zodonga, okanye izibane zesipili, zibizwa ngokuba zizibane.
Isibane sinokukhanyisa amagumbi okanye sikhanyise njengokuziqhelanisa ukuba sikhanyisiwe ngeswitshi. Iyaguquguquka njengakwi el mundo Ukusuka ekuvukeni, isibane sinokusetyenziswa kwihlabathi lamaphupha. Ukutolikwa kwephupha kwalo mfanekiso wephupha ke kwahlukile.
1 Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolikwa ngokubanzi
Isibane sinika ukukhanya. Kwilizwe lamaphupha, naye unokukhanya Ukuqonda zisa xa kufikwa ekulaleni kokulala. Ukuba izibane ezininzi zinokubonwa kwihlabathi lamaphupha, indlela yobomi ikwalungele ukuphupha, kwaye kulula ukuhamba. Ukucoca isibane kukwatolikwa njengophawu oluqinisekileyo lwexesha elizayo.
Ukuba iphupha likhanyisa isibane, liya kwenza umntu onwabe okanye abe luncedo kakhulu. Ngamanye amaxesha lo mfanekiso wamaphupha nawo wenza i- utshintsho olulungileyo yobomi obonisiweyo. Ukuba izibane kwihlabathi lamaphupha zikhanyisiwe ngabanye abantu, baya kuba nakho ukwenza into entle ngokuphupha.
Ibhalbhu ekhanyayo kwisibane ngokubanzi luphawu oluhle kuba iyabonisa Suerte Kwaye uvuyo. Ukuba isibane esidanyazayo okanye esidanyazayo sibonakala, ithemba lephupha aliyi kuzaliseka. Ikwasongela Bona nentiyo. Isibane se-sooty naso asilunganga, njengoko sibonisa ukungahambi kakuhle.
Ukuba iphupha linesibane esikhanyisiweyo, liyayifanekisela ukuzimela y amandla ukukhusela uluvo lwakho. Nangona kunjalo, ukuba ukukhanya kuyacima, unokulindela iindaba ezimbi okanye ukufa. Ukuba iphupha lilahla isibane esikhanyisiweyo, izicwangciso zakho kunye nezicwangciso ziya kuza kumangalisa kwaye ngokukhawuleza. Ukuba iphupha liphosa isibane ngaphandle kwefestile ngenxa yoloyiko, iphupha liyalumkisa ngabahlobo bobuxoki.
Kodwa kukwakho nezinye iintshukumo zephupha ezinesibane njengomfanekiso obalulekileyo wephupha. Ukuba iphupha likhanyisa iimpahla ngesibane, lisongele kwihlabathi lokuvuka. Ukuthotywa nokusilela. Ukuba isibane siqhuma kwihlabathi lamaphupha, abahlobo baya kuba ziintshaba, ngelixa isibane esaphukileyo sibonisa ingozi yokungakhathali. Ukuba omnye umntu wophula isibane, oku kulumkisa iphupha lesithembiso esiyingozi, ngelixa, ngokubanzi, isibane esaphukileyo sinokubonisa ukufa.
Ukuba iphupha licima isibane, litshabalalisa olunye uvuyo. Oku kunokwenziwa ngesazela, kodwa nangokungazi. Ukuba abanye abantu bacima isibane, kuya kufuneka balahlekelwe bubuthongo. Ukuba isibane siyacima ngokubanzi, oku kunokuba ngenxa yoku Ukufa Iingoma.
Ukuba izibane zehlabathi lamaphupha zigcwele ioyile okanye ipetroleum, zibonisa ishishini elilungileyo elizisa impumelelo. Nangona kunjalo, izibane ezingenanto zingumqondiso woxinzelelo okanye ukuphelelwa lithemba yokuphupha. Iskripthi eskrinini ephupheni sihlala sibonisa ukumangaliswa okuhle ebomini bokuvuka. Iglobhu njengesibane inokubhekisa kumathuba umntu anokuwasebenzisa ngexesha lokulala.
Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolikwa kwengqondo
Isibane sikukuchazwa kwengqondo kwephupha njengophawu lwe bulumko nobunkokeli butolika. Kule meko, ikwabonisa ubomi ngokubanzi.
Rhoqo isibane sisetyenziswa kuphando lwamaphupha kunye ukuqonda kwaye kufanele ukuba kuzise ukukhanya kubumnyama be-subconscious.
Isibane esikhanyayo sibonisa ukulingana kokulala. Nangona kunjalo, ukuba isibane sibuthathaka ngokwaneleyo kwaye sidanyaza, luphawu lwe iingxaki zengqondo yokuphupha.
Uphawu lwephupha «isibane» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, isibane sibonisa ukukhanya kobumnyama, kunye nokukhanya kwe Qikelela kunye nokungafi.